Sakafo hozika - recipe
Ny fahavaratra dia fotoana mahafinaritra hankafizana ny legioma vaovao. Ny iray amin'ireto legioma ireto dia ny zucchini, izay na dia amin'ny fampiasana hafanana aza no mampitombo ny fananana ilaina. Avy amin'izany dia afaka manomana sakafo marobe maromaro ianao, saingy raha mamoaka tsiro tsy misy herisetra, dia maneho mazava tsara ny toetra tsarany izy ireo miaraka amin'ny zavatra hafa mahaliana sy mahasalama. Iray amin'ireny lovia ireny ny sakay hoe zucchini.
Ny tsindrin-tsakafo ho an'ny fofony dia tsy sarotra. Ilaina ny manapaka ny ao anatiny amin'ny voany miaraka amin'ny masomboly, ary mameno ny toerana malalaka amin'ny fofona samihafa: hena, legioma, holatra na serealy. Indrindra indrindra ny sakafo matsiro sy mofomamy mofomamy miaraka amin'ny sakafom-bary, mofomamy ao anaty lafaoro na miompy ao anaty multiwark.
Zucchini dia mety feno tanteraka na manapaka amin'ny halavany roa. Manompoa miaraka amin'ny lovia mena.
Aorian'izay isika dia hilaza aminareo ny fomba fiomanana sy fanomanana ny sakafo matsiro hozakini.
Zucchini voankazo sy legioma
hena voatsabo rehetra - 300 g;
voatabia voatokana - 150 g;
dipoavatra Bulgary mamy - 150 g;
tsaramaso mafy - 75 g;
voankazo voajanahary vaovao;
Ny squashes dia voasasa, maina, manapaka amin'ny vato avo amin'ny efatra santimetatra ary manala ny fotony. Nosokasina ary nopetahana tongolo kely kely ary nivezivezy tamin'ny karodra lehibe na maina dia miaiky anaty menaka ary manala azy. Avy eo, aforeto ny henam-pako miaraka amin'ny roosta, voapoizina kely voapoikany, voatabia ary voatabia 100 grama mitovy amin'ny zaridaina, sira miaraka amin'ny dipoavatra sy ny zava-manitra. Ny habetsaky ny efamira misy kitapo, izay feno vinaingitra tsara ho an'ny fofona, na fanaka be dia be ary mandrakotra ny mayonnaise. Mametraka ao anaty oven izahay, mihamafana hatramin'ny 180 degre, ary mahandro mandritra ny adiny iray eo ho eo. Amin'ny endriny na amin'ny tavoahangy mialohan'ny sakafo, ampio tranokely kely na rano kely, mba tsy ho maina ny zucchini. Fito ambin'ny folo minitra alohan'ny fiafarana dia manaparitaka ny tsipìka tsirairay avy amin'ny tsofa masaka mafy.
Vita avy any am-bikam-paty miaraka amin'ny hena sy legioma dia mamafa kely kely ary manompo eo amin'ny latabatra, mipafotra miaraka amin'ny legioma maitso.
Salady misy vary sy holatra
Salady "Caprice" miaraka amin'ny akoho
Ahoana no ahafahana manao yogourt ao an-trano?
Pancakes tsy misy lafarinina
Olom-boankazo misy holatra ao anaty vilany ao anaty lafaoro
Potato zrazy miaraka amin'ny laisoa
Fanangonana kisarisary vaovao Milavitsa 2014
Appliqué avy amin'ny kodiaran'ny kodiarana
Ahoana ny fomba hamahana ny fisarahana?
Inona ny halavin'i Liam Payne?
Dyufaston ary isam-bolana
Vitamina ho an'ny be taona
Ahoana ny fomba hanesorana ny ratra amin'ny akne?
Bibidia mangatsiatsiaka amin'ny rano - recipe
Inona no ilaina amin'ny kaviar mena?
Nahoana no manosika ny vavony ilay saka?
Ny fahantrana aorian'ny IVF
Dokotera fanaintainana ho an'ny zaza